भक्तपुरमा दुईजना आइसोलेसन वार्डमा - 761खबर.com
भक्तपुरमा दुईजना आइसोलेसन वार्डमा
चैत्र १२,भक्तपुर - कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंकामा भक्तपुरका दुईजनालाई आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सविन प्रधानले कोरोना भाइरसको संक्रमणजस्तो लक्षण देखिएपछि उनीहरुलाई भक्तपुर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको हो । उनीहरुको नाक तथा घाटीको श्राव (स्वायब) परीक्षणका लागि टेकु पठाइएको उनले बताए । अर्को एकजनालाई भने उपचार गरेर घर पठाइएको उनको भनाइ थियो । दुईजनालाई भक्तपुर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा सिफ्ट गरिएको छ, प्रहरी उपरीक्षक प्रधानले भने, एकजनालाई भने उपचारपछि घर पठाइएको छ । आइसोलेसन वार्डमा राखिएका दुईजना सरकारले नेपाल प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुअघि विदेशबाट घर फर्केका हुन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावनालाई लक्षित गरी भक्तपुरका ९ वटा अस्पतालमा ३१ शैय्याको आइसोलेसन वार्ड तयार गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार आइसोलेसन शैय्याको संख्या बढाउन सकिने गरी तयारी अवस्थामा रहेको ती अस्पतालहरुले जनाएका छन् । हाल भक्तपुर अस्पतालमा दुई, नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा ६, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, मध्यपुर, डा. इवामुरा मेमोरियल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा चारचार, नागरिक र सिद्धि स्मृति अस्पतालमा दुईदुई शैय्याका आइसोलेसन वार्ड तयार गरिएको छ । भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुमित्रा गौतमले आवश्यकअनुसार आइसोलेसन शैय्या बढाउन सकिने गरी सबै अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको बताइन् । भक्तपुर अस्पतालले १९ शय्याको सिंगो मेडिकल वार्डलाई आइसोलेसन वार्डमा परिणत गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राखेको उनको भनाइ थियो । मेडिकल वार्डलाई नै आइसोलेसन वार्ड बनाउने गरी काम भइरहेको छ, मेसु डा. गौतमले भनिन्, त्यहींबाट संक्रमितको सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थासमेत गर्ने भएका छौं । उनका अनुसार अस्पतालमा संक्रमित आइहालेको अवस्थामा उनीहरुको उचित उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिलाई अस्पतालमै बस्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।डा.इवामुरा मेमोरियल अस्पतालले पनि आवश्यक परे आइसोलेसन वार्डलाई २५ शैय्यासम्म पुर्‍याउन सकिने जनाएको छ । त्यस्तै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले पनि आइसोलेसन वार्डलाई २५ शय्यासम्म पुर्‍याउन सकिने बताएको छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले पनि आइसोलेसन वार्डको शय्या बढाउन सकिने गरी तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। पुकारचन्द्र श्रेष्ठले चार शय्यालाई बढाएर २० शैय्या पुर्‍याउन सकिने जानकारी दिए । आवश्यक भए मेडिकल र सर्जिकल वार्डलाई खाली गरेर आइसोलेसन वार्डमा परिणत गर्न सकिने तयारी गरेका छौं, उनले भने । खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा पुगे ७३ त्यस्तै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका ७ खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रस्थित क्वारेन्टाइन स्थलमा बस्नेहरुको संख्या ७३ पुगेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रधानले ६७ जनाबाट सुरु गरिएको क्वारेन्टाइन स्थलमा अहिले ७३ जना पुगेको छ । विभिन्न देशबाट हवाई मार्गबाट नेपाल आइपुगेकालाई यहाँ राखिएको हो । विदेशबाट आएकाहरु अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड रहेको छ । सोहीअनुसार उनीहरु आफ्नै खर्चमा खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक प्रधानका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको पहिलो २४ घन्टाको घाटी तथा नाकको श्राब (स्वायब) भने लिइएको छैन । अब एकैपटक १४ दिनपछि मात्रै उक्त स्वायबको जाँच गरिने उनले जानकारी दिए । केही समयअघि कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको चीनको वुहान सहरबाट उद्धार गरेर ल्याइएका एकसय ७५ जनालाई विद्युत तालिम केन्द्रका क्वारेन्टाइन निर्माण गरी त्यहाँ राखिएको थियो । अन्नपुर्ण पोष्टका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु सबै सुरक्षित घर फर्केपछि सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।